window7မတက်လို့ပါ - MYSTERY ZILLION
window7မတက်လို့ပါ
window start normally ကနေပြီး ၀င်းဒိုးဆက်မတက်နိုင်ဘူး ဖြစ်တယ်ဗျ
repair လုပ်တော့လည်း မရလို့ပါ ။ အဲဒါ ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလည်း သိပါရစေ ခင်ဗျာ ။
1. it may be some virus fault
2.alot of error in your registry
3. your window is notagenuine window of microsoft
( it may be pirate window )
4. Real License Window Can only Stable foralong time...
thz u bro ,
i think pirate window have no shock .... bcoz i use long time there is no problem with cracked window7 ultimate ...
change window cd or window xp
ဒါပေမယ့် အကို ပြောပုံအရဆို...ကျွန်တော်ထင်တာပြောတာနော်....
hard disk မဟုတ်ရင် power supply ကြောင့့်ဖြစ်နိုင်တယ်
့hard disk ဆိုရင်တော့....ERD Commander လိုဟာမိျုးနဲ ့window တတ်ပြီး
check disk လေးဘာလေးလုပ်ကြည့်ရင်ရလိမ့်မယ်....မရတော့ရင်လဲ လိုက်ပေါ့ဗျာ....
Power Supply ဆိုလည်း...လဲရမှာပဲ.....
တစ်ခုတော့ရှိတယ်...အပေါ်ကပြောတာတွေ....မလုပ်ခင်....အကို ့PC ကိုဖွင့်ပြီး....cmos
clear လုပ်ပြီး....အရင်ပြန်တက်ကြည့်ပါလား...မရရင် ဒါမှမဟုတ် laptop ဖြစ်နေရင်တော့ အပေါ်ကအဆင့်တွေလုပ်ကြည့်ပေါ့ဗျာ.....
the most reasons of window failure.
1. bios , (uefi/ ide).
2. harddisk (bad sector , sata, power cable)
3. infected window (virus, spam, etc)